Nagu saabsan - Ikkaro
Magacaygu waa Nacho waxaanan ahay injineer warshadeed by UPV (Jaamacadda Polytechnic ee Valencia)
Websaydhkan waxaan uga hadlayaa mowduucyo had iyo jeer i xiiseeya oo aanan weligay gelin, waqti iyo lacag la'aan darteed ...
In kasta oo ay run tahay in hadda aanan haysan waqti iyo lacag, laakiin waxaan hayaa rabitaan badan, oo ugu yaraan magdhow ah.
Marka waxaan ka hadli doonaa:
Ikkaro wuxuu dhashay Juun 2006… mashruuc ahaan in laga hadlo walxaha duulaya; joornaalada, boomerangs, qalabka kontoroolka raadiyaha, IWM
Sidaa awgeed magaceeda la xidhiidha Icarus el ina Daedalus, oo ka baxsaday xabsigooda iyagoo baalal ka sameysan baalal iyo wax. Duulimaadkiisii ​​Icarusna wuxuu bilaabay inuu u kaco dhanka qorraxda, ilaa ay dhogortii baalashiisu ka dhalaashay.
Hadduu u maleeyey inuu ku dambayn doono sida uu maanta yahay, waxaa laga yaabaa inuu doorto magac kale.
Maalmihiisii ​​hore, waxaan qornay dhowr maqaal iyo macluumaad ku saabsan qaniinyada iyo boomerangs webkuna wuu xirnaa ku dhowaad laba sano, ilaa aan dib uga bilaabanay mashruuca oo wuxuu noqday isku dhaf u dhexeeya baloog sida loo sameeyo ama loo sameeyo iyo dhammaan noocyada xiisaha leh iyo mashaariicda guriga.
Haddii aad xiiseyneyso inaad waxbadan naga ogaato, waxaad leedahay qeybta Dhaqanka, waxyarna waan dib u qori doonnaa taariikhdeenna.
Taariikhda Ikkaro Logo
Qoraaga ikkaro logo waa Alejandro Polando (alpoma) laga bilaabo Teknolojiyad duugowday, oo ku guuleystey tartankii astaanta ee aan ugu dabaaldegeyno https://en.99designs.es/logo-design/contests/logo-blog-experiments-7757/entries
Erayada abuureheeda, astaanta ayaa mataleysa
gantaal leh taabasho carruurnimo oo raba inuu muujiyo isku darka xamaasadda iyo nacasnimada oo badanaa loo baahan yahay markay tahay fulinta nooc kasta oo alaab guryaha lagu soo saaro
Ma rabtaa inaad wax walba ka ogaato Ikkaro?
La aasaasay 2006 si markii hore looga hadlo aaladaha duulaya, waxay si dhakhso leh u noqotay meel lagu sii daayo wax kasta oo aan ka jeclahay DIY, aaladaha, cuntooyinka, iyo waxyaabaha yar yar.
Qeybta waxaan ka soo aruurineynaa taxane maqaalo ah markii aan ka hadlaynay webka, way yar yihiin kuwa yarna. Sanado kahor waxaan kahadalnay tirakoobka, fikradaha mashaariicda sida golaha, jaaliyadaha, markaan xireyno madasha, markaan soo noqonay Abriil iyo inaan xirno, hahaha, laakiin sidoo kale waxaan kahadalnay raafka, guuleysteheeda, iwm
Waana in ka badan 10 sano wax la siiyaa dad badan, si loo tijaabiyo waxyaabo badan oo loo arko waxa aan shaqeyn iyo waxa u baahan in la beddelo. Ama uun iska xidho waxyaabo aanu wakhtigu ku habboonayn.
Haddii aad xiiseyneyso mashruuca, wax yar ka quuso waxa aan kaaga tagno haddii aad su'aal qabtidna, haka waaban inaad weydiiso ;-)
Ma aqaano haddii qaybtani ay macno samaynayso maanta ama haddii ay ka wanaagsan tahay in wax walba si wanaagsan loo miiqeeyo oo loo xiro hal boosteejo loona cusbooneysiiyo sida loogu baahan yahay. Waxaan tan u siinayaa hadday dhacdo sheeko weyn oo Ikkaro ah sannadahan 12 iyo kuwa hadhay
Halkan waxaad ku haysaa taariikhdeena, tirooyinka, shaqaalaha ... Wax walba oo ku saabsan cidda aan nahay
Muddo dheer ayaan ka shaqeyneynay mashruuc cusub waxaanan ugu dambeyn sameyn karnaa sii deyn.
Tani waa Deddalus, a guriga daabacaadda oo ku takhasusay DIY, sida loo sameeyo, naftaada u samee, sayniska iyo farsamada.
Waxaan aaminsanahay inay jirto baahi muhiim ah oo noocan ah oo ku jirta luuqadeena oo aan dooneyno inaan soo bandhigno buugaag iyo hal-ku-dhigyo ku saabsan DIY, sayniska iyo teknolojiyadda, ee tayada ugu sareysa lehna faahfaahinta ugu weyn ee suurtogalka ah.
Maqnaanshaha xaqiijinta buugga, waxaan ka faalloon karnaa dhowr qodob oo muhiim ah.
Dhammaan buugaagta / hal-ku-dhegyada waxay noqon doonaan DRM lacag la'aan
Buug kasta oo la iibsado, waxaad marin u heli doontaa qaab kasta oo elektaroonig ah oo aan ku daabacno (pdf, epub, mobi, iwm) iyo wixii cusbooneysiin ah ee aan sameyno.
Marka lagu daro iibinta shaqsiga, waxaan la shaqeyn doonnaa rukhsad sannadeed aad u jaban.
Haddii aad rabto inaad ka warqabto dhammaan wararka ka soo baxa daabacaha. Gali Deddalus oo iska qor joornaalka.
Su'aalo kasta oo aad qabtid waad noo soo qori kartaa xiriir@deddalus.com
Ikkaro waxaan ku leenahay akoonno furan oo kuwa ugu waaweyn ah shabakadaha bulshada. Isku mid kuma dhajinno dhammaan shabakadaha bulshada. Midkastaba wuxuu leeyahay nidaamkiisa deegaan oo waxaan laqabsaneynaa waxa nagafiican.
Kuwani waa halka aan ugu firfircoon nahay
Waxaan ku eegaynaa indho wanaagsan
Waxaan sidoo kale u abuurnay tijaabo inkasta oo aanan hadda u adeegsan.
Ku koox Xing
Haddii aad seegto wax kasta oo aad ka qaybqaadatid iyo / ama aad rabto inaad ku talisid isbeddel. Faallo ka tag.
Waan ku sugeynaa…
Intii lagu jiray in ka badan 7 sano nolosha, balooggan wuxuu soo maray isbeddello badan, badan, gaar ahaan heerka naqshadeynta iyo shaqeynta, laakiin had iyo jeer la shaqeynaya Drupal.
Markan arrimuhu way ka sii darnaayeen. Waxaan ka badalnay Drupal maareeyaha WordPress.
Waan ogahay waxa taageerayaasha Ikkaro ay xiiseynayaan inay tahay in tayada tayada leh ay sii socoto in la bixiyo iyo inbadan oo soo noqnoqota. Haddaba faahfaahinta iyo sababaha tahriibka waxay aadayaan dhamaadka maqaalka. Waa kuwan horumarintii aan soo kordhinnay iyo kuwa aan rajeyneyno.
Maxaad filan kartaa hadda kadib?
Tahriibku waqti badan ayuu qaatay. Hadda laga bilaabo iyo inkasta oo ay tahay inaan sii wadno sifaynta "faahfaahinta" waxaan rajeynayaa dib u bilaw maqaalada daabacaadda.
Fikradda inta lagu guda jiro sanadkaan marka lagu daro sii wadida daabacaadda waxay noqon doontaa dib u eegaan "daciifnimada" waxyaabaha ku jira baloogga oo dib u qoro, ka faalloona ama kiisaska liistada, cusbooneysii. Marka in maqaal kasta oo Ikkaro ah aad u xiiso badan.
Waxa ugu cajaa'ibka badan ayaa ah taas faallooyinka ayaa mar labaad shaqeeya. Shaki la'aan waa war weyn oo aan seegnay inay wali dhexdhexaad yihiin kahor intaan la daabicin.
Mashiinka raadinta mar labaad ayuu shaqeeyaa. Waxay ku jirtaa dusha sare ee barta.
Waxaan haynaa nooc cusub oo loogu talagalay moobilka iyo kiniiniga aad u qabow. Iska hubi ;-)
Iyada oo tahriibka waan tirtirnay madasha iyo bogag badan oo ka yimid markii aan u oggolaannay qof walba inuu wax qoro oo aan waxba ku soo kordhin. Waxaan ka tagnay kuwa xiisaha isku dhafan.
Waxaan u soconaa dib-u-habeyn ku sameyso dhammaan qaybaha, dib u qoro maqaallada isla markaana abuuro bogag deg deg ah oo gaar ah si loo soo bandhigo waxyaabaha ku jira si habsami leh iyo in la fududeeyo isticmaalka goobta.
Waxaan aaminsanahay in dhibaatada sawirada lagu xaliyay rukunka wararka warsidaha. Diiwaangeli haddii aad rabto oo aad ku hesho emaylkaaga wararka aan daabacayno
Waxaan haynaa faahfaahin badan oo aan ku horumarin karno. Way kuu fududahay inaad hesho waxyaabo qariib ah, haajiridu waligeed ma sahlana, gaar ahaan boggaga waaweyn, haa waxaad soo sheegaysaa dhibaatooyinka Waan ku qanacsanahay.
Haddii aadan naga raacin shabakadaha bulshada waad sameyn kartaa, waxaan ku siinnaa waxyaabo kala duwan shabakad kasta oo bulsheed :)
Waxaan sidoo kale bilownay a majaladda flipboardka loogu talagalay DIY.
Ku saabsan ka haajirida Drupal ilaa WordPress
Kuwa daneeya waxyaalahan oo dhan. Haa, dhamaadka waxaan ka tagayaa gacaliyahayga Drupal. Balooggu wuxuu soo maray Drupal 5, 6 iyo 7 waxaanan ku bartay anigoo samaynaya tijaabooyin badan oo goobta ka socda (qalad weyn)
Ugu dambeyntiina, maareeyayaashu waa qalab waana inaan isticmaalnaa midka ku habboon baahiyaha aan haysanno. Runtii waxa muhiimka ah waa waxa aan ku sameyno aaladahaan iyo fursadaha ay na siinayaan. Waxaan u wareegeynaa WordPress:
si looga faa’iideysto aqoonta-sida Blog. Halkan ayaan ka shaqeeyaa. Waxaan maamulnaa 200 baloog, dhammaantood wordpress waxaanan leenahay koox horumariyayaal ah, SEOs, iyo khabiiro ku takhasusay mowduucyo kaladuwan oo u heellan inay kharribaan oo ay si isdaba joog ah u horumariyaan baloogyada iyo waxaad rabto inaan kuu sheego, waa ceeb in la lumiyo dhammaan aqoontaan iyo waa inaan raadiyaa noloshayda si aan u barto sida loogu sameeyo Drupal.
Sababtoo ah waxaa jira macluumaad dheeraad ah iyo caawimaad labada Isbaanish iyo Ingiriisi ah. Waxay qaadataa wax badan si loo helo waxyaabo gaar ah oo loogu talagalay Drupal iyo waxyaabo badan oo kaa caawiya. Anigu ma ihi barnaamij-yaqaan ama naqshadeeye, ama wax sidan oo kale ah waana inaan helaa noloshayda si aan u hagaajiyo baloogga. Iyo inkasta oo aan wali jeclahay Drupal, runtu waxay tahay in fududaynta wordpress ay tahay dhibic weyn oo ay ku jirto fadligeeda.
Tahriibku wuxuu ahaa mid gaabis ah oo xanuun badan. Waxaan dhowr jeer ka soo haajiray Drupal illaa WordPress, had iyo jeerna ka imaado baloogyada hal-isticmaale ah iyo nooc hal nooc ah. Sidoo kale marwalba Drupal 5.x iyo 6.x ilaa wordpress 3.x laakiin Drupal 7 dhib ayaan kala kulmay oo waxay ku dhexjirtay waxyaabaha ay ka koobantahay cinwaannada iyo qorayaasha, intaas waxaa sii dheer inay tahay inaan maareeyo urlyada, oo aanan haysan iswada.
Shaqo badan oo gacanta ah laakiin waxaan u maleynayaa in natiijada ay u qalantay.
Caawa saacadu markay tahay 00.00 waqtiga loo qabtay soo gudbi astaamaha tartanka walina way na soo diraan.
Runtu waxay tahay in badan oo kuwa soo diray ay aad u fiican yihiin waxaanan jeclaan lahaa inaan ku waydiiyo midka ama kan aad ugu fiican. Si kale haddii loo dhigo, waxay la midoobaysaa baloogyada iyo goleyaasha waxayna waxoogaa matalaysaa degelkan.
Waxaan kaaga tagay 8-da ilaa iyo hada aan aad ujeclahay. Waxay u kala horreeyaan alifbeeto ahaan ee uma kala horreeyaan siday u kala doorteen
6.- Jamie Shoard kii labaad
7.- Marwo Ligeia
8.- Naqshadaynta Siah
Waxaad arki kartaa dhammaan astaamaha laga soo diray http://99designs.com/contests/7757
Haddii aad jeceshahay mid aan halkan oolin, waad ka faaloon kartaa, in kasta oo mabda 'ahaan cidda guuleysata laga dhex dooran doono kuwan.
Salaan iyo mahadsanidiin kahor aragtidaada
3 faallooyin ku saabsan «Nagu saabsan»
February 28, 2014 at 2:23 waxaan ahay
Waad salaaman tihiin, sideen ugu daabacaa boggaaga? ama waxaan kuu soo dirayaa macluumaadka boostada. Mahadsanid
Abriil 26, 2014 markay ahayd 11:22 am
Waad salaaman tahay, magaceygu ​​waa Jose Luis waxaanan jecelahay hal-abuurka, marwalba waxaan ka fikiri jiray waxyaabo, fikrado iwm ... Waxaan sameeyay waxyaabo aan allifay oo aan guriga ku haysto sida nidaamka soo kabashada biyaha ee qubeyska iyo weelka suuliga, mishiinkeyga Marcianitos iyo fikradaha qaar oo aanan bilaabin inay bilaabaan maxaa yeelay sifiican ugama fiirsado iyaga, hadii halkan aan ku muujin karo lana wadaagi karo waxaan filayaa inaan aad u jeclaan lahaa
Janaayo 19, 2016 markay ahayd 9:52 pm
Waa salaaman tahay, waxaan rajaynayaa inaad fiicantahay, waxaan warqad kuugu soo qorayaa Dominican Republic, runtiina waxaan ka mid ahay kuwa xiiseynaya mashruucan mashiinka CNC. aniga iyo shirkaddayduba waxaan samaynay dhamaanba mashiinada ... waxaan u sameeyaa maxaa yeelay waxaan rabaa inaan cadeeyo naftayda waxa aan ahay. Lacag dhib iguma ahayn inaan iibsado dhamaan mishiinada.waxaan markasta doonayay inaan sameeyo tan iyo intii aan ahaa ilmo. Xitaa waxaan ku takhasusay birta. Adigana waan kugu dhaarshay, wiilka wanaagsan ... hadda aan u dhaadhacno ganacsiga ... haddii aan doonayo inaan sameeyo isla mashiinka miisaanka warshadaha, nooca matoorrada aan isticmaali karo? Kizas waa isku mid? Laakiin leh danab sare 220 -110v.